जापानको सबवेको ५ कुरा जुन सधै सत्य हुदैन। | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानको सबवेको ५ कुरा जुन सधै सत्य हुदैन।
जापानमा वर्सेनि ८० लाख बढी पर्यटकले भ्रमण गर्दछन। त्यसकारणले यहाँ अनेकौ स्टेरिओटाईप बन्ने गर्दछन। यी कुराहरु थुप्रै मिडिया मार्फत फैलने गर्दछन। यी स्टेरिओटाईपहरु कतिपय त कथित मात्र हुने गर्दछन। आज हामी हजुरहरुलाई जापानमा सबैले सोचने गरेका ५ त्यस्ता स्टेरिओटाईपको जानकारी गराउनेछौ। हजुरले थुप्रै माध्यम बाट यी कुराहरु जापानमा गर्न हुन्न भन्ने सुन्नु भएता पनि आफ्नी जापानको बसाईमा यता कता देख्नु हुनेछ।
१. ट्रेनमा बोल्न पाईदैन
ट्रेनहरु बिहानी पखको रश आवर शान्तनै हुने गर्दछ। तर बेलुकाको रश हावरभने त्यति शान्त नहुन नि सक्छ। युवा पिडि र स्कूल कलेजका भुराहरु त झन् ट्रेनमा गफ गरिरहेका हुन्छन। हजुर पनि अवस्था हेरेर आफ्नो साथीहरु संग गफ गर्न सक्नु हुनेछ। यदि ट्रेनको माहोल शान्त छ भने शान्त रहदा ठिक हुन्छ। तर अरु पनि मजाले गफ गर्दै छन् भने हजुरहरु पनि गफ गर्न सक्नु हुनेछ। तर एउटा कुरा, ट्रेनमा फोनमा गफ गर्न भने नराम्रो मानिन्छ। हजुरहरुले जापानीहरु ट्रेन चढ्दा फोनमा बोलेको बिरलै भेट्नु हुनेछ। फोनमा कुरा गर्न मनाहि छ भनेर ट्रेनहरुमा स्पस्ट लेखिएको हुन्छ। यदि ईमरजेन्सी आईपरेमा आफ्नो सिटबाट उठेर सानो स्वरमा कुरा गर्नु होस्।
no talking on your phone. Even if you seeaJapanese person doing so, it is considered very rude and there are signs on most subways telling you not to do so!
२. शारीरिक असक्षमता भएकाहरु कम हुन्छन
जापानको सार्वजनिक सवारी साधन र स्थलहरु शारीरिक असक्षमता भएकोलागि हरुलाई सहज होस् भनेर बनाईएको हुन्छ। यहाँ एलिभेटर, ब्रेईल, अडियो एनाउन्स्मेण्ट, प्राईओरिटि सिटहरु हुने गर्दछन, सहयोगको लागी स्टेसन स्टाफहरु हुने गर्छन। त्यसैले यहाँ को सार्वजनिक सवारीमा अन्धा, बहिरा र शारीरिक असक्षमता भएका मानिसहरु थुप्रै देखिने गरिन्छ।
३. सधै लेफ्ट साईडमा हिड्नु पर्छ
नियम अनुसार चाहि मानिसहरु लेफ्ट साईड्मा हिड्नु पर्दछ। धेरै जसो सबवेमा देब्रे साईडमा हिड्नु पर्ने साईन रखिएको हुन्छ। तर कुनै कुनै सब्वेमा भने दाहिने साईडमा हिड्ने साईन टासिएको हुन्छ। टोकियोको शिन्बशी स्टेसनमा थुप्रै दिशाहरु बाट मानिसले बाटो काट्ने हुनाले मानिसहरु भीडबाट बच्न दाहिने देब्रे दुवै साइडमा हिडदछन।
४. एस्केलेटरमा लेफ्ट साइडमा उभिने
यो नियम भन्दा पनि चलन हो। एस्केलेटरमा मानिसहरु देब्रे साईडमा उभिन्छन भने दाहिने साईड भने हिड्ने मानिसहरुको लागि छोड्छन। तर जापानको कुनै कुनै एस्केलेटरहरु निकै सागुरो हुन्छन। त्यस्तो साघुरो एस्केलेटरमा दुई लेन हिड्न नमिल्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता एस्केलेटरमा हजुरले दाहिने वा देब्रे साईडमा उभिनु पर्ने हुदैन।
५. जापानीहरु सिग्नल काट्दैनन
यो सत्य हो कि जापानीहरु बाटो काट्दा ट्राफिक सिग्नल मान्ने गर्छन। सानो सानो क्रस वाकमा पनि जापानीहरु हरियो सिग्नलको लागि पर्खिनछन्। तर कुनै कुनै सबवेहरु एउटा बाट अर्को लाईन जान बाटो काट्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेला मानिसहरु निकै व्यस्त हुने भएकोले सिग्नल पर्खेर नबस्ने जापानीहरु पनि थुप्रै भेटिन्छ। तर यो व्यबहार निकै खतरनाक हुने भएकोले बाटो काट्दा सिन्ग्नल हरियो भएपछी मात्र काट्नु होस्।